एसिड आक्रमण : आक्रमणकारी श्रीमान भएको खुलासा, तीन घण्टामै पक्राउ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं । काठमाडौंको कालोपुलमा बुधबार बेलुका युवतीमाथि एसिड आक्रमण गर्ने पक्राउ परेका छन् । कालोपुलमा बुधबार साँझ ७ बजे तिर एसिड आक्रमण भएको थियो ।
प्रहरीले आक्रमणकारीलाई घटना भएको तीन घण्टा भित्रै पक्राउ गरेको हो । कालोपुलमा जेनी खड्का नामकी २२ वर्षीयाँ युवतीमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि आक्रमणकारीको खोजीमा जुटेको प्रहरीले आक्रमणकारीलाई काँडाघारीबाट नियन्त्रणमा लिएको कमल पोखरी प्रहरीले डिसी नेपाललाई जानकारी दिएको छ ।
कमल पोखरीका एक जना प्रहरी अधिकारीले डिसी नेपालसँग भने, ‘तीन घण्टा भित्रै हामीले आरोपीलाई पक्राउ गरेका छौं । उसले आरोप स्वीकार गरेको छ ।’
प्रहरीका अनुसार ३८ वर्षीय विष्णु भुजेल पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार पीडित युवती आक्रमणकारी भुजेलकी कान्छी श्रीमती हुन् । प्रहरीले घटनबारे अनुसन्धान भइरहेकाले थप विवरण प्राप्त नभएको जनाएको छ ।